လုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ …… မဟာဆန်…. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ …… မဟာဆန်….
Posted by နွေဦး on May 17, 2013 in Creative Writing, Think Different | 18 comments
ကျုပ်က နိုင်ငံရေးနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ၀င်မပြောတော့ ပါဘူးလို့ နေတာပါဘဲ..။
ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ မိုးဦးလေဦးမှာ ၀င်တတ်တဲ့ မုန်တိုင်း….
နှစ်တိုင်းလည်း ကြီးတာ သေးတာသာကွာတာပါ တလုံးနှစ်လုံးတော့ ၀င်ပါတယ် ။
အရင် ကြီးကြီးမားမားနာဂစ်တုန်းက ဖြစ်မယ်ဆိုတာ လူတွေတဖွဖွ ပြောနေတာတောင် စစ်အစိုးရဆိုတာက မလှုပ်မရှား..
သူတို့အတွက် နိုင်ငံရေးအမြတ်ထွက်စရာမရှိတော့ …
ဖြစ်ပြီးမှသာ ထောက်ပံ့ပေးကမ်းတာတွေ တနင့်တပိုး ဝေချမ်းစားသောက်လိုက်ကြတာ.. ခုထိပြောလို့မဆုံး အပြောခံကြရတယ်မလား ။
နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်မထွက်ဘဲ အရှုံးပေါ်ပေမဲ့ စီးပွားရေးတွက်ခြေကိုက်သွားကြတာ…
ဒါကို ဒီအစိုးရက သင်္ခန်းစာ ကောင်းကောင်းယူပြီး …
အခု ၀င်လာတဲ့ ညောင်နာနာ မဟာဆန်မုန်တိုင်း ကို အဆင့်တွေမြှင့်ပေးပြီး …..
အရေးပေါ် ကော်မရှင်တွေဖွဲ့ ….
လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေးကို လူတွေအာရုံပြောင်း..
မကောင်းကြံတဲ့ အဓိကရုန်းကို မေ့ကြအောင်ပြင်..
သမ္မတကြီး ကိုယ်တိုင် ရုပ်ထွက်ပြပြီး အရေးတကြီးဟန်လုပ်..
ဟော..ခုတော့ မဟာဆန်က ..
အသေခံငြင်းကြမဲ့ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေသူတွေ …
အဲဗျ.. ရေးရင်းနဲ့ ဘာတွေဖြစ်ကုန်ဘီလဲမသိတော့ဘူး..
မကောင်းလဲ ရွာသူရွာသားတွေ ၀ိုင်းပြင်ပေးကြမှာဘဲမဟုတ်လား..။
စစ်တွေမှာနေတဲ့ သုငယ်ချင်းကို လှမ်းမေးကြည့်လိုက်တော့ သူတို့က ဒီမုန်တိုင်းလောက်ကို အရေးမထားပါဘူးတဲ့ … ဒါပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေက မုန်တိုင်းကာကွယ်ရေးတွေ မုန်တိုင်းလွတ်ရာကို ပြောင်းခိုင်းတာတွေကြောင့် တော်တော်ကသီလင်တဖြစ်ရပြီး အလုပ်ပျက်အကိုင်ပျက် ဖြစ်ကုန်တယ်လို့ ပြောတယ် …
အင်း… အဲ( အင်း= ခရက်ဒစ် တူ ကိုချို )
မည်သို့ မည်ပုံ ပြောရမည် မသိ ။
အင်း မုန်တိုင်းက ရခိုင်ကို မ၀င်ဘဲ အခြားတိုင်းပြည်ဘက်ဝင်လို့ ဒီလိုစကားတွေထွက်လာတာလား လို့တော့ စဉ်းစားမိတယ်၊ အကယ်လို့သာ မုန်းတိုင်းက ရခိုင်ကို ၀င်ခဲ့ရင်ကောဗျာ အဲ ငါလည်း ဘာတွေစဉ်းစားမိပါလိမ့်နော်။
အင်း မြင်းတစ်ကောင်နဲ့ သားအဖနှစ်ယောက်ပုံပြင်ကိုပဲ သွားပြီး မြင်ယောင်မိတော့တယ်ကွယ်။
လုပ်စားတယ်ဆိုတာ မဟုတ်တန်ကောင်းပါဘူးဗျာ… ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံကလူတွေ တစ်ခုခုဆို အဲလိုမြင်တာ တယ်ဆိုးသကိုးဗျ…. ဒါမုန်းတိုင်းမလာတော့ ပြောအားရှိသွားတာပေါ့… မုန်တိုင်းများဝင်သွားကြည့်ပါလား.. အဲလိုပြောဖို.အသံတောင် ထွက်ချိန်မရလိုက်ပဲနေမှာပေါ့ဗျာ…
မုန်တိုင်းလာမယ်ဆိုပြီး ကာကွယ်ပေးတဲ့ သူတွေ ကို လဲ အားနာပါအုံးဗျာ… ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ဆိုတာ လိုပါတယ်ဗျ…. ဒါမှ ထိခိုက်နစ်နာမှု လျော့ကျမယ်မို.လား…
မုန်တိုင်းလာမယ်ဆိုတော့ ကြောက်လိုက်ကြတာသူ.အပြင်မရှိကြဘူး… မလာတော့ဘူးဆိုတော့ ကြိုတင်ပြင်ဆင် ကာကွယ်ဖို.လုပ်တဲ့သူတွေကို လုပ်စားတယ်လို.ပြောကြတယ်…. ကဲ အဲဒါ အဲဒါ..
မုန်းတိုင်းလာမယ်ဆိုလို. တာဝန်ရှိသူတွေက ရွှေ.ပြောင်းပေးကြ တော့ လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်နဲ. ရွှေ.ကြ …….. အဲလိုအပြစ်မြင်မယ်ဆိုလဲ မယုံမရွှေ.ပဲနေကြပေါ့..
အခုတော့ မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတယ်လဲ ဆိုရော ဟုတ်လဲမဟုတ်ပဲနဲ. လုပ်စားတယ်ဖြစ်ရော…..
ဒါပဲ…….. သခင်မျိုးဟေ့ဒို.ဘားမန်း (ခရက်ဒစ်တူ သဂျီး)
်ဘာမဆိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာမမှားပါဘူး။ နာဂစ်သင်ခန်းစာယူပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်လို့ပဲ ကျွန်မကတော့မှတ်ယူပါတယ်။ နာဂစ်တုန်းက ဘာမှပြင်ဆင်မှု့မရှိခဲ့လို့ လိမ့်နေအောင်ခံခဲ့ရတာမို့ ကျွန်မတို့ လဲ အကယ်ရွေ့ဆိုပီး ကိုယ့်အိမ်မှာ တနိုင်တပိုင်ပြင်ဆင်မှု့လေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မဟာဆန်မ၀င်ခဲ့လို့ပါ။ တကယ်ဝင်များဝင်ခဲ့ရင် ဒါတွေဟာတကယ့်ကိုအသုံးဝင်မှာပါ။ အဲကျတော့လဲကျေးဇူးတွေတင်ကြမှာပါ။ မ၀င်ခဲ့လို့ပြင်ဆင်ထားသမျှအလကားဖြစ်ကုန်တော့ အဆိုးမြင်သမားတွေအကြိုက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲထင်မိ ပါတယ်။ ( ကိုနွေဦးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ တခြားဝါဒဖြန့်နေသူတွေကိုဆိုလိုပါတယ်။ )
ခုတော့ ကိုယ့်စကားကိုယ်ရှင်းမှ ဖြစ်တော့မယ်….
ပထမ… ဆိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်က မုန်တိုင်းတခု အကြောင်းပြုပြီး နိုင်ငံရေး အမြတ်ထုတ်သွားကြတာကို ဆိုချင်တာပါ ။
ဒုတိယ… ဒီ မဟာဆန်ကို စကတည်းက ဘယ်အတိုင်းအတာထိဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ ရခဲ့ကြပေမဲ့ ချဲ့ကားပြီး မလိုအပ်ဘဲလုပ်ခဲ့ကြတာကို ပြောချင်တာပါ ။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး လုပ်ကြတာကို လုပ်စားတယ်လို့ ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး ။
တတိယ… နိုင်ငံတော်သမ္မတ တယောက်အနေနဲ့ သူ့ထက်မက (မုန်တိုင်းထက်မက) နိုင်ငံတော်က လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လွှတ်တော်ကိုလွှဲချ.. ဟိုလွှဲချ ဒီလွှဲချနဲ့ မျက်နှာ ထွက်မပြခဲ့တာကိုပြောချင်တာပါ ။ လက်ပန်းတောင်လိုအရေး ရခိုင်လိုအရေး မိတ္ထီလာလိုအရေးတွေမှာ တက်တက်ကြွကြွ လုပ်မပြဘဲ ကိုယ့်ဆီတိုက်ရိုက် ပြဿနာ မရောက်နိုင်တဲ့ မုန်တိုင်းလိုမျိုးကြတော့ လုပ်ပြနေလိုက်ကြတာ.. အဲဒါကိုပြောချင်တာပါဗျာ..။
ကိုယ်မလုပ်နိုင်လို့သူများလုပ်ပေးတာကို မုဓိတာ ပွါးတတ်သူပါဗျာ..။
ကိုနွေဦးရေ မြန်မာမင်းအဆက်ဆက် ပေါ်ပျုလာဖြစ်မယ်ဆို သူတို့ရှေ့ဆုံးက ပါချင်ကြတာလေ။
ပြသနာရှင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ ကော်မတီတို့ ၀န်းကြီးဌာနတို့ ဟိုလူဒီလူ အဲလိုလွဲကြတာဘဲလေ။
အော်အစောအတည်းက အဲလို တည့်တည့်ပြောလိုက်ပြီးရော………
အဲလိုအဆိုးမြင်ကြတဲ့ လူတွေကို ပြောတာပါ…
ဒုတိယ… ဒီ မဟာဆန်ကို စကတည်းက ဘယ်အတိုင်းအတာထိဖြစ်မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ ရခဲ့ကြပေမဲ့ ချဲ့ကားပြီး မလိုအပ်ဘဲလုပ်ခဲ့ကြတာကို ပြောချင်တာပါ ။နည်းနည်းလေးတော့လွဲနေတယ် လွဲလွဲလေးပဲကောင်းပါတယ် ….. ကိုငှက်ကြီးရဲ့သီချင်းလေးကို သတိရမိတယ်ဗျာ…..
နာဂစ်ဝင်တုံးက ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်းမသွားဘဲ လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး ဧရာဝတီတိုင်းကိုမွှေသွားတာ သတိရအုံးမယ်ထင်ပါတယ်
ဒါပေသိ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး ကြိုတင်ခန့်မှန်းမူ့ လွန်ကဲလွန်း
တကယ်လာလျှင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ချိန် နာရီပိုင်းအလိုမှ ခန့်မှန်းသတိပေးလုပ်နိုင်၏။
ကိုနွေဦး ရဲ့ ဘုရားဖူး Post လေးတွေကို လဲ ဖတ်နေတာကို ကြုံ လို့ ဝင်ပြောတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာကို ကြားဖူးတာကတော့
ထပ်တိုးဖို့လိုသေးတယ် အစွပ်အစွဲပါ ခံနိုင်မှ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ ရမယ်လို့……….
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးအခေါ် အပြုအမူများကို နှစ်သက်လှပါ၏။
ရွှေတိုက်ပြောသလိုပဲ…ဒါကြောင့် စာရိုက်ပျင်းလို့ကူချလိုက်တယ်..(ခွက်ရက်ဒစ်တူ ဆယ်အိမ်ဂေါင်း)
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုနွေဦး နဲ့ နဲနဲ အမြင်တူပါတယ် ။ လုပ်စားသွားတာတွေ ပါတယ် ဆိုတာ ..
ဒါပေမဲ့ လုပ်စားသင့်လို့ လုပ်စားသွားတာပေါ့ဗျာ ..
(၁) ပထမဆုံး မိုးဇလ ကမြန်မာပြည် မ၀င်ဘူးလို့ ကြေညာတယ် ။ ဦးထွန်းလွင် က ၀င်မယ်လို့ ကြေညာတယ် ။ဂျာနယ် တွေက မိုးဇလ ကို မယုံကြည်သလို နဲ့ခနဲ့တဲ့တဲ့ ရေးကြတယ် ။
မိုးဇလ အသံပြောင်းသွားပြီး ၀င်မယ် ဘဲ နောက်ပိုင်းဖြစ်သွားတယ် ..
(၂) ကျွန်တော် ယူထားတဲ့ Tropical Storm Risk (TSR) which is sponsored by UCL, Aon Benfield, Crawford & Company and Aon Benfield UCL Hazard Research Centre ကထုတ်ပေးတဲ့ ခန့်မှန်းချက် အရ မြန်မာပြည် ပါလာလိုက် မပါလိုက် ဖြစ်နေကတည်းက မြန်မာပြည် အလွန်ဆုံး အဖျားခတ်ရုံ ဆိုတာ မှန်းလို့ ရနေသလိုပါဘဲ ။ ဒါပေမဲ့ ဦးထွန်းလွင် နဲ့ ( မိုးဇလ ကနောက်ပိုင်း) မြန်မာပြည် ၀င်မယ်ဆိုတာ ချည်းဘဲ တောက်လျောက်ပြောနေတယ် ။ နောက်ဆုံးနေ့ ကျတော့မှလမ်းကြောင်းပြောင်း ပါတယ် ဆိုပြီး အဆုံးသတ်လိုက်တယ် ။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လဲ ကိုနွေဦးတွေးသလိုဘဲ တွေးမိပါတယ်။
လုပ်စားသင့်လို့ လုပ်စားရတာကတော့ ..
-ခဏ အာရုံပြောင်းထားနိုင်တယ် ။
-စခန်းတွေ ရွှေ့တော့ လူဦးရေ စစ်ပြီးသားဖြစ်မယ် ( ဒါကြောင့် ငတ တွေ မပြောင်းဖူးဆိုပြီး ငြင်းဆန်ပြီး ညဘက်မှ ပြောင်းကြတာ ဖြစ်မယ် ထင်တယ် ..ထင်တယ်)
– လူထုအားလုံး ကျေနပ်တယ် ။
– လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးဖြစ်တယ် ။
– တကယ်လို့ ၀င်လာခဲ့ ရင်လည်း ကြိုတင် ကာကွယ်ပြီးဖြစ်သလို အပြစ်တင် ဝေဖန်ချက်များမှ လွတ်ကင်းတယ် ။
ဒါကြောင့် လုပ်စားသင့် လုပ်စားထိုက်တဲ့ လုပ်စားမှု့ အဖြစ်သာ မြင်ပါသည်။
ဟိုလေ … ကျနော်ကတော့ ဘာမှ မပေါဒေါ့ဘာဘူးလို့ …
ပို့စ်လည်း ဖတ် …
ကွန်မန့်တွေလည်း ဖတ်သွားတယ်လို့ ..
အဲ့ဒါလေး ဝင်ပြောတာပါ … ဟီးးးး